သူတစ်ပါးအပေါ် မကောင်းပြောတဲ့ လိင်တူချစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် တွန်းနိုး တစ်ယောက်ကို ဖော်လိုက်တဲ့ John Lwin – MC Tv Club
သူတစ်ပါးအပေါ် မကောင်းပြောတဲ့ လိင်တူချစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် တွန်းနိုး တစ်ယောက်ကို ဖော်လိုက်တဲ့ John Lwin
Stars & Models Int’l Yangon ရဲ့ ဦးစီးတည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ ဂျွန်လွင်ဟာ သူကိုယ်တိုင်လည်း မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလမ်းခရီးကို လျှောက်လှမ်းခဲ့သလို အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိလာပြီး ဝါရင့်သမ္ဘာ ရင့်တစ်ယောက်ဖြစ်လာချိန်မှာလည်း မော်ဒယ်လ်တွေများစွာကို မွေးထုတ်ပေးနေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
စကားပြောပွင့်လင်းပြီး မှန်ရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုတတ်တဲ့ ဂျွန်လွင်ဟာ ဒီကနေ့မှာလည်း လိင်တူချစ်တဲ့သရုပ် ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဂျွန်လွင်က “လွန်ခဲ့တဲ့2လ က ပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ က ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် ထဲ မှာ တွန်း နိုး တယောက်ရှိတယ် သိကြလားဟင်? မေးစေ့ကလဲ filler ထိုးထားတယ် ယီးစားက ဟန် ပြ လဲရှိတယ်( မသိပဲအရှခံတဲ့မိန်းမကြီးလဲ သနားစရာ) ဘောလုံးလဲကန်တယ်။တခုရှိသေးတယ်။
ဒီတွန်းနိုးကလဲသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနံမည်ကြီးpresenter နဲ့ လဲ အကြီးအကျယ် ပေါ့။ တွန်းနိုး = ,သိရင်comment မှာရေးခဲ့ကြပါ။ မှတ်ချက် လူလောကမှာ ကိုယ်ဘာလဲသိရဲ့နဲ့ ဖုန်းကွယ်ထားတဲ့သူတွေကို အရမ်းမုန်းလို့ပါ။
လူတိုင်းလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ် သိုသော် သူတပါးကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားခွင့်မရှိ။ ငါတိုကြတော့ အရှိ အရှိတိုင်းနေတော့ ငါတို့က သူတော်ကောင်း မဟုတ် မသိရင် သူက သူတော်ကောင်း ” ဆိုပြီး ဖော်ထုတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျွန်လွင်ကတော့ ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာကို သိရဲ့နဲ့ သူ တစ် ပါးကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့သူတွေကို အရမ်းမုန်းတာကြောင့် နာမည်ကြီးဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်မင်းသားရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအမှန်ကို ဖော်ထုတ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ဂျွန်လွင်ပြောတာ ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေေ လာက်ပြီထင်ပါတယ်နော်။
သူတစ္ပါးအေပၚ မေကာင္းေျပာတဲ့ လိင္တူခ်စ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ တြန္းနိုး တစ္ေယာက္ကို ေဖာ္လိုက္တဲ့ John Lwin
Stars & Models Int’l Yangon ရဲ႕ ဦးစီးတည္ေထာင္သူျဖစ္တဲ့ ဂြၽန္လြင္ဟာ သူကိုယ္တိုင္လည္း ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အႏုပညာလမ္းခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သလို အသက္အ႐ြယ္တစ္ခုေရာက္ရွိလာၿပီး ဝါရင့္သမာၻ ရင့္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခ်ိန္မွာလည္း ေမာ္ဒယ္လ္ေတြမ်ားစြာကို ေမြးထုတ္ေပးေနသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
စကားေျပာပြင့္လင္းၿပီး မွန္ရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ေျပာဆိုတတ္တဲ့ ဂြၽန္လြင္ဟာ ဒီကေန႕မွာလည္း လိင္တူခ်စ္တဲ့သ႐ုပ္ ေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕အေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဂြၽန္လြင္က “လြန္ခဲ့တဲ့2လ က ျပတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲ က ဇာတ္ပို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထဲ မွာ တြန္း နိုး တေယာက္ရွိတယ္ သိၾကလားဟင္? ေမးေစ့ကလဲ filler ထိုးထားတယ္ ယီးစားက ဟန္ ျပ လဲရွိတယ္( မသိပဲအရွခံတဲ့မိန္းမႀကီးလဲ သနားစရာ) ေဘာလုံးလဲကန္တယ္။တခုရွိေသးတယ္။
ဒီတြန္းနိုးကလဲသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကနံမည္ႀကီးpresenter နဲ႕ လဲ အႀကီးအက်ယ္ ေပါ့။ တြန္းနိုး = ,သိရင္comment မွာေရးခဲ့ၾကပါ။ မွတ္ခ်က္ လူေလာကမွာ ကိုယ္ဘာလဲသိရဲ႕နဲ႕ ဖုန္းကြယ္ထားတဲ့သူေတြကို အရမ္းမုန္းလို႔ပါ။
လူတိုင္းလြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ သိုေသာ္ သူတပါးကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားခြင့္မရွိ။ ငါတိုၾကေတာ့ အရွိ အရွိတိုင္းေနေတာ့ ငါတို႔က သူေတာ္ေကာင္း မဟုတ္ မသိရင္ သူက သူေတာ္ေကာင္း ” ဆိုၿပီး ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဂြၽန္လြင္ကေတာ့ ကိုယ္ဘာလဲဆိုတာကို သိရဲ႕နဲ႕ သူ တစ္ ပါးကိုဖုံးကြယ္ထားတဲ့သူေတြကို အရမ္းမုန္းတာေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈအမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးေရာ ဂြၽန္လြင္ေျပာတာ ဘယ္သူျဖစ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားေနေ လာက္ၿပီထင္ပါတယ္ေနာ္။
Previous Article မိခင်မေတ္တာအပြည့် ရှိလှ တဲ့ စုစုဝေရဲ့ စကားသံ
Next Article နာမည်ကြီး အိန္ဒိယ ဇတ်ကားထဲက အဝတ်အစားနဲ့ ပုံလေးတွေရိုက်ပြီး ပျော်နေတဲ့ Dee